M/weyne Faroole oo magacaabay taliyayaasha ciidanka bilayska ee Puntland. – Radio Daljir
Oktoobar 31, 2010 12:00 b 0
Garowe, Oct 31 – Wareegto ka soo baxday madaxtooyada Puntland, uuna ku saxiisan yahay M/weynaha Puntland C/raxmaan Maxmed Faroole ayaa lagu magacaabay taliyaha ciidanka bilayska Puntland, iyo saddex ku xigeen.
Hay’adda amniga ee ciidanka bilayska oo lagu daray ciidanka asluubta, loona bixiyey ciidanka bilayska ee nabadgelyada & dhaqan-celinta ayaa dib u habayn lagu sameeyey, lana siiyey awood iyo agab u sahla gudashada hawshooda, qaybna ka ah qorshaha dawlada ee tayaynta ciidanka amniga iyo adkaynta amniga ee gobollada Puntland.
Wareegtada ayaa u dhignayd sidan:
Xeer M/weyne Lr.96 ee 30/10/2010, magacaabid xileed:
Waxaa la mideeyey ciidamada bilayska & Asluubta ee Puntland, waxaana loo bixiyey Ciidanka bilayska ee nabadgalyada & dhaqancelinta Puntland; waxaa loo magacaabay saraakiisha hoos ku xusan.
1. Gen. Cali Nuur Cumar – Taliyaha Ciidanka Bilayska ee Puntland,
2. G/Sare Maxamed Siciid Maxamed – Taliye ku xigeen,
3. G/Sare Muxayadiin Axmed Aw Muuse – Taliye ku xigeen,
4. G/sare C/llahi Saalax Maxamed – Taliye ku xigeen.
Qorshaha horumarineed ee 13-ka xaafadood ee magaalada Galkacyo oo la soo bandhigay, ayna ka doodeen duqayda xaafadaha & degmooyinka.